Iimuvi onokuzibukela kwiYouTube SIMAHLA (kwaye zisemthethweni) | Ndinike ixesha lokuphola
UGabriela moran | | Cine, I-cinema yakudala, Cinema ngohlobo
I-YouTube iselinye lamaqonga aphambili kwaye asetyenziswa kakhulu Esebenza njengomnatha wonxibelelwano. Abasebenzisi ngokubanzi babelana ngeevidiyo, kungoko kukho ithuba lokukwazi ukubukela iimovie ezigcwele simahla. Nangona kunjalo, kukho amalungelo okushicilela kunye nemigaqo ethile ethintela umxholo wephepha ukuze ungangeni kuthintelo lomthetho. Ngeli xesha Ndibonisa ezinye iimuvi onokuzibukela kwiYouTube simahla kwaye ngokusemthethweni kwaye ineziza ezinomdla kakhulu. Ukuba ungumntu othanda iimuvi zakudala, ngekhe uyeke ukufunda umxholo endikulungiselele wona!
Ngelixa kuyinyani ukuba amaqonga okusasaza anenxalenye enkulu yentengiso phakathi kwabasebenzisi, iYouTube imele ukhetho olukhululekileyo olunokhetho olungafumanekiyo kwamanye amaqonga. Singafumana yonke into ukusuka kumaxwebhu amaxwebhu ukuya kuthi ga kumdlalo bhanyabhanya! Ndiyakumema ukuba uqhubeke nokufunda ukuze ufumane okona kulungileyo kwi-YouTube kumcimbi woku Iifilimu zakudala ezingekho phantsi kwelungelo lokushicilela.
Izinketho endizibonisayo ziyahambelana nexesha apho iteknoloji yayikude kakhulu kunoko sikwaziyo namhlanje: zimnyama zimhlophe kwaye ezinye zihambelana neemovie ezingathethiyo. Nangona kunjalo lUmgangatho wamabali uphezulu kakhulu kwaye unexabiso elingenakubalwa lenkcubeko. Ukhetho lubonisa iifilimu ezifanelekileyo zabalinganiswa abanjengoCharles Chaplin, kunye nefilimu yokuqala ye-vampire, enye yeefilimu zombie ezingoovulindlela nazo zibonisiwe, kunye namabali abonwayo kwikamva kunye namabali aphambeneyo abandakanya ababulali kunye nehipnosis.
1 Ukukhawuleza kwegolide
2 Isivusi kwi-expresso (Eli nenekazi liyanyamalala)
3 I-Nosferatu: i symphony eyoyikisayo
5 Ubusuku babaFileyo abaphilayo
6 Oomatshini Jikelele
7 IKhabinethi kaGqirha Calgary
8 Ngaba zikhona iimovie ezingakumbi onokuzibukela kwiYouTube ngokusemthethweni?
Kwaqala ngo-1925 kwaye kunjalo Inkwenkwezi yeqonga lomdlalo bhanyabhanya uCharles Chaplin, naye wabhala, walathisa kwaye wavelisa ifilimu. "I-Golden Rush" ithathwa njengomnye wemisebenzi yakhe edumileyo kwaye yafumana amagama amabini e-Oscar xa kwakhutshwa inguqulelo yesandi ngo-1942.
Impikiswano yile esekwe kwitramp efuna igolide bafudukela eKlondike eCanada apho ubuninzi bezinto ezixabisekileyo babethathwa njengabakho. Endleleni, wothuswa sisaqhwithi esinyanzela ukuba abalekele kwindlu eshiyekileyo eyindlu yombulali oyingozi! Ikamva lizisa undwendwe lwesithathu endlwini kwaye ngenxa yesaqhwithi akukho namnye unokushiya indawo.
Abalinganiswa abathathu bafunda ukuhlala kunye kwinto abanokuyishiya endlwini. Emva kweentsuku ezimbalwa, isaqhwithi siyayeka kwaye nganye nganye iyaqhubeka nendlela apho isiphelo sayo sasinenjongo enye: ukufumana umgodi wegolide!
Ngexesha lendlela ahamba ngayo umlinganiswa wethu ophambili, udibana neGeorgia. Umfazi omhle othandana naye kodwa ekugqibeleni wohlukana naye. Ibali lisitshela izinto ezininzi eziza kwenziwa ngabalinganiswa bethu ngaphambi kokufikelela kwinjongo yabo yokuqala. Isizathu sokuqaphela ukusebenza ngokungathandekiyo kukaChaplin owayehlala ekhuthaza abaphulaphuli ngoburharha bakhe obukhethekileyo obonisa iifilimu zakhe ezimnyama nezimhlophe.
Ukuphela kwebali kuyonwabile, kuba umlinganiswa ophambili ufumana le nto ayifunayo. Nangona kunjalo ekugqibeleni uyaqonda ukuba into ayifezekisileyo ibaluleke ngakumbi kuneyona golide ebeyikhangela.
Isivusi kwi-expresso (Eli nenekazi liyanyamalala)
Umdlalo omnandi kunye neklasikhi ogcwele ukurhanela licebo lesihloko ekuthethwa ngaso. Yakhishwa kwiscreen esikhulu ngo-1938 kwaye iNew York Times yabeka eyona bhanyabhanya ibalaseleyo kuloo nyaka. Yifilimu yaseBritane ekhokelwa nguAlfred Hitchcock, ibali lisekwe kwinoveli "Iivili ezijikelezayo." Abalinganiswa abaphambili nguMargaret Lockwood, Paul Lukas, Basil Radford Redgrave kunye noDame May Whitty.
Iyelenqe lisixelela uhambo olubuyela ekhaya a isibini sabakhweli esibuyela eLondon, kwikhaya labo. Ngenxa yemozulu engentle uloliwe uyanyanzeleka ukuba eme ukuze abakhweli bagcinwe bekhuselekile; isibini esihambayo sihamba silala kwidolophu esemagqagaleni. Inxalenye enomdla iqala nini xa bebuyela kuloliwe kwaye bayaqonda ukuba umgibeli ulahlekile. Uhambo olungagungqiyo lokugoduka lwaluza kujika lube luphupha!
Wonke umkhweli uba ngumrhanelwa. Ukukhula kwebali kutyhila iimfihlelo ezinomdla ngaphezulu kwesinye sazo….
I-Nosferatu: i symphony eyoyikisayo
Ukuba ungumthandi wevampire, kuya kufuneka uyibone! INosferatu yifilimu yokuqala enxulumene nebali lokwenyani likaDracula elibhalwe nguBram Stoker. Ngaphandle kwento yokuba bekukho impikiswano kunye neminye imiba yezomthetho yomlawuli uFriedrich Wilhelm Murnau ngokuchasene nabazuzi belifa lebali lokuqala, le vidiyo ithathwa njengesiqalo seefilimu ze-vampire ezilungileyo kwimbali yohlobo lwefilimu.
Isibini esincinci esincinci ebalini, umyeni ogama lingu UHutter uthunyelwa eTransylvania kwishishini ukuvala isivumelwano no-Count Orlok. Nje ukuba afakwe kwigumbi lokulala apho, uHutter ufumanisa uxwebhu lwe-macabre oluthetha nge-vampires kwaye lamshiya enomdla. Emva kwexesha uya kwibhotwe lobalo apho adibana khona nomnini sono.
Ngomhla emva kotyelelo lwakho kwinqaba, UHutter ufumanisa amanqaku amabini entanyeni yakhe ehambelana nokulunywa zizinambuzane. Khange awunike ukubaluleka ngakumbi kumsitho ade abe u-dUfumanisa ukuba wayephambi kwevampire yokwenyani, Bala u-Orlok!
Amanqaku asentanyeni yakhe asishiya nombuzo: Ngaba uHutter ngoku uza kuba nenxano elifanayo legazi elinqwenelwa ngumfazi wakhe?
Yifilimu ethe cwaka yemvelaphi yaseJamani eyakhutshwa ngo-1926 kwaye yaphakamisa ubunyani behlabathi ngo-2026 Oko kukuthi, iminyaka eli-100 kamva!
Ifilimu isixelela nge Ukwahlulwa kweeklasi zentlalo kunye nocalucalulo Kukho phakathi kwezi zimbini apho abasebenzi bahlala khona kwindawo ezingaphantsi komhlaba kwaye akuvumelekanga ukuya kwilizwe langaphandle. Ukudinwa kukucalucalulwa nokucinezelwa yirobhothi, lAbasebenzi bathatha isigqibo sokuvukela abo banelungelo. Basongele ukutshabalalisa isixeko kunye noxolo apho iklasi elinelungelo apho izifundiswa nabantu abanamandla oqoqosho bafunyanwa khona.
Sifumana abalinganiswa ababini abaphambili, inkokeli kwiklasi nganye yezentlalo, njengabalinganiswa abaphambili kunye namaqhawe. Bakhathalela u-cXolelanisa izivumelwano ngokubhekisele kwintlonipho nokunyamezelana.
Kuyathakazelisa indlela eboniswa ngekamva apho kungasabonakali kude kakhulu ngoku.
IMetropolis yenza Ifilimu yokuqala eza kunikwa inqanaba "leMemori yeHlabathi" ebonelelwe yi-UNESCO. Ukuqwalaselwa kungenxa yobunzulu ekusonjululwe ngayo imiba yentlalo.
Ubusuku babaFileyo abaphilayo
Yifilimu eyoyikisayo ekhutshwe ngo-1968 kwaye iguqule uhlobo lweemovie ezijolise ku-zombie. Ibonwa ngabathile njengeyona bhanyabhanya ibalaseleyo kolu didi ngenxa yendima eyadlalwa "kukuhamba beswelekile" kweli bali kwaye nefuthe kakhulu kwimiboniso bhanyabhanya eya kuthi ikhutshwe emva koku. Ngenxa yempumelelo eveliswe yile mxholo, kwaphuhliswa isaga enezahluko ezintandathu. Ezi sequels zakhutshwa kwiminyaka ye-1978, 1985, 2005, 2007 kunye no-2009.
Ifilimu yokuvula, efumaneka kwiYouTube, imalunga iqela labantu elizifumana likwedwa kwifama ethile kwaye lilwela ubomi balo emva kokuba iqela labafileyo libuyela ebomini. Ibali liqala ngabazalwana ababini abalekela kuloo ndawo kwaye bafumanisa ukuba ayingabo bodwa abazama ukuphila.
Ngexesha layo, ifilimu yavelisa ukwesaba phakathi kwabaphulaphuli ngenxa yemiboniso enobundlobongela nengathandekiyo eyenziwa ziZombi.
UBuster Keaton ngumdlali weqonga owaziwayo ukusukela ngexesha likaCharles Chaplin. Yifilimu ethe cwaka, emnyama nomhlophe eyeyoluhlobo lwehlaya. Kukulungiswa kwesiganeko sokwenyani esenzeka ngexesha leMfazwe yamakhaya eUnited States ngo-1862.
Imbali isixelela ngobomi be UJohnnie Grey, umqhubi kaloliwe Yenkampani kaloliwe yaseNtshona neAtlantic. Unothando kunye no-Anabelle Lee, ocela ukuba abhalise emkhosini xa kuqala imfazwe. Nangona kunjalo, umlinganiswa wethu ophambili ayamkelwa kuba bajonga izakhono zakhe njengomatshini osebenza ngakumbi. Emva kokuva ngokwala komkhosi, uAUNabelle ushiya uJohnnie njengegwala.
Kuthatha ixesha ukuba iqabane langaphambili lidibane kwakhona kwisiganeko esibi esibeka ubomi babo emngciphekweni.
Kuyafaneleka ukukhankanya ukuba ifilimu yayingamkelwa kakuhle ngexesha lokuqala kwayo ngo-1926, kwaze kwaba yiminyaka kamva apho yafumana ukuthandwa kwaye yayithathwa njengenye yeendima eziphambili umdlali owake wadlala.
IKhabinethi kaGqirha Calgary
Siyaqhubeka nohlobo olungacacanga kwaye kumnyama namhlophe. IKhabinethi kaGqirha Calgary yifilimu eyoyikisayo yaseJamani eyakhutshwa ngo-1920. LIbali lakhe lisibalisela ngokubulala i-psychopath enesakhono sokulalisa ngomntu kwaye isebenzisa umntu oleleyo ukwenza olo lwaphulo-mthetho!
UGqr.Calgary ngumphathi wobuchule osebenzisa ubuchule bakhe kunye nobuthathaka bomntu oleleyo ukuze abeke uhlobo lomboniso owonwabisa abantu balapha. Ibali lixelwa ukubuyela emva kwaye uxelelwa nguFrancis, omnye wabalinganiswa abaphambili ebalini.
Ngokubanzi, ibali lijikelezwe yimbonakalo emnyama ngenxa yento ebaliweyo ethetha ngemixholo enxulumene nobudenge kunye nemidlalo yengqondo. Ifilimu ithathwa njenge Umsebenzi omkhulu we-cinema yokubonisa iJamani. Isicatshulwa sefilimu sisekwe kumava abo babenzi bayo: UHan Janowitz noCarl Mayer. Bobabini babengama-pacifists kwaye bazama ukuveza ngendlela ekhethekileyo amandla athe urhulumente wasebenzisa umkhosi.
Alithandabuzeki elokuba yinto evuselelayo yengqondo edlala ngengqondo yababukeli kwaye iyothusa ngenxa yendlela elivezwe ngayo ibali.
Ngaba zikhona iimovie ezingakumbi onokuzibukela kwiYouTube ngokusemthethweni?
Ewe ikhona! Izihloko endizibonakalisileyo zingcamlo oluncinci lomxholo osemthethweni esinokuwufumana. Ngeli xesha ndigxile kwiifilimu zakudala ezivuselele umdla omkhulu ngokuhamba kwexesha. Ukongeza, Kukho amaxwebhu angaphezulu kunye neefilimu ezikhoyo kwaye sinokuyonwabela ngokusemthethweni kwaye simahla.
Andingethandi ukuvalelisa ngaphandle kokukhankanya ukuba kukho amaqhinga amaninzi okufumana umxholo wasimahla kumaqonga anjengeYouTube, nangona kunjalo, masikhumbule ukuba uninzi lwezi zinto alukho mthethweni. Masizame ukufaka isandla kwihlabathi elingcono ukunqanda iintshukumo ezingekho semthethweni eziphula ilungelo lokushicilela kwaye kufanelekile nomsebenzi obandakanyekayo ekwenzeni imveliso yefilimu.
Ndiyathemba ukuba uyonwabele ukhetho lweemovie onokuthi uzibukele kwiYouTube ngokusemthethweni!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndinike ixesha lokuphola » Cine » Iimuvi onokuzibukela kwiYouTube simahla (kwaye zisemthethweni)